Ahịa Ọgbọ: Otu Ọgbọ Ọ bụla Si Adaba Na Nweta Teknụzụ | Martech Zone
Ọ bụ ihe zuru oke nye m ka m na-asụ ude mgbe m hụrụ ụfọdụ isiokwu na-ekwutọ Millennials ma ọ bụ na-ekwu okwu nkatọ ndị ọzọ dị egwu. Agbanyeghị, enwere obi abụọ na enweghị ebumnuche omume agwa n'etiti ọgbọ na mmekọrịta ha na teknụzụ.
Echere m na ọ dị mma ikwu na, na nkezi, ọgbọ ndị okenye anaghị ala azụ ịkpọte ekwentị ma kpọọ mmadụ, ebe ndị na-eto eto ga-awụli elu na ozi ederede. N'ezie, anyị nwere onye ahịa wuru a ozi ederede ikpo okwu maka ndị na-ewe ndị ọrụ ịkpọtụrụ ndị na-aga ime ihe… oge na-agbanwe agbanwe!
Ọgbọ ọ bụla nwere àgwà ha dị iche iche, otu n’ime ha bụ otú ha si eji teknụzụ eme ihe. Site na teknụzụ na-agbanwe ngwa ngwa na ọsọ ọsọ, ọdịiche dị n'etiti ọgbọ ọ bụla na-emetụtakwa ụzọ otu ọgbọ ọ bụla si eji usoro teknụzụ dị iche iche iji mee ka ndụ ha dịkwuo mfe - ma na ndụ ma n'ebe ọrụ.
Gịnị Bụ Ọgbọ (Boomers, X, Y, na Z)?
BrainBoxol mepụtara ihe omuma a, Teknụzụ Evolution na Otu Anyị Si Ghara, nke ahụ na-akọwa ọgbọ nke ọ bụla na ụfọdụ omume ha na-enwekarị n’ihe banyere nkuchi teknụzụ.
Baby boomers (Amụrụ 1946 na 1964) - bomụaka boomers bụ ndị mbido ịmalite kọmputa kọmputa - mana n'oge a na ndụ ha, ha dịkwu ntakịrị na-ala azụ ịmụta teknụzụ ọhụrụ.
Ọgbọ X (Amụrụ ya na 1965 rue 1976) - isi tinye aka na email na ekwentị iji kwurịta okwu. Gen Xers bụ na-etinye oge dị ukwuu n'ịntanetị na iji ekwentị ha iji nweta ngwa, mgbasa ozi mmekọrịta, na ịntanetị.
Millennials ma ọ bụ Ọgbọ Y (Amụrụ ya 1977 rue 1996) - buru ụzọ jiri ozi ederede na mgbasa ozi mmekọrịta. Millennials bụ ọgbọ nke mbụ tolitere na mgbasa ozi mgbasa ozi na smartphones ma nọgide na-abụ ọgbọ na ojiji nke teknụzụ.
Ọgbọ Z, iGen, ma ọ bụ Centennials (Amụrụ 1996 na mgbe e mesịrị) - na-eji ihe eji arụ ọrụ nkwukọrịta aka na akụrụngwa iji kwurịta okwu. N'ezie, ha nọ na ngwa izipu ozi 57% nke oge ha na-eji ekwentị ha.
N'ihi ọdịiche dị iche iche ha, ndị ahịa na-ejikarị ọgbọ dị iche iche eme ka mgbasa ozi na ọwa dị mma ka ha na-agwa otu akụkụ okwu.
Usoro ahia nke ahia bu usoro ahia nke na-eji nkewa nke dabere na otu ndi mmadu amuru n'ime oge di otua ndi ha na ha ajuju dika ndi ozo na ndi ozo na ndi ozo.
Akwụkwọ ozi zuru ezu na-enye ụfọdụ akparamàgwà zuru ezu, gụnyere ụfọdụ ndị na-eweta nsogbu n'ezie na-akpata esemokwu n'etiti ọgbọ dị iche iche. Lelee ya…
Tags: nwa boomernwa igboboomersnarị afọchịkọbagen yọgbọọgbọ xọgbọ yahịa ọgbọọgbọgenxgenyọzọnkewaTechnologyeji teknụzụ site n'ọgbọy
diana n'oké osimiri
Feb 17, 2021 na 10:25 PM
Ọ na-ekwu na Gen Z bụ "200% nwere ike ikwu okwu na ekwentị mkpanaaka n'oge a na-agba ajụjụ ọnụ" - "200% dị ka o yikarịrị" chọrọ ntụnyere, yana "200% dịka o yikarịrị" pụtara "ọnụọgụ abụọ" - yabụ okpukpu abụọ NYE na-ekwu okwu na ekwentị mgbe a na-agba ajụjụ ọnụ? na ọ bụ nke a dị ka onye na-agba ajụjụ ọnụ ma ọ bụ na-agba ajụjụ ọnụ? Kedu otu nke a si adaba na naanị 6% dị ka ọ dị mma ikwu okwu, ederede, ma ọ bụ sọfụ mgbe ị na-arụ ọrụ? Job ajụjụ ọnụ B working na-arụ ọrụ if .. ma ọ bụrụ na naanị 6% na-eche ya ok, n'ụzọ dị a theyaa ka ha okpukpu abụọ ka yiri ka OK-ekwu okwu na ekwentị n'oge a ọrụ N'ajụjụ ọnụ? Nke a enweghị ezi uche, naanị mgbakọ na mwepụ !!! ?????
Feb 18, 2021 na 5:48 PM
Nke ahụ bụ nchọpụta siri ike. Echere m na ha ga-odi mfe nchebe… “yikarịrị”.